July 5, 2019 Thuta Star 0
“ကိုကို လုပ်တယ်လို့ ကျွန်မကို လာ မတိုင်ဘူးရှင့်။” “အဲဒီ ကိုကို ကိုလည်း ကျွန်မ မဆူ လိုက်ဘူးရှင့်။” ဒေါ်နှင်းနှင်းနု ဆရာမ၊ Wisdom Hill မူကြို နေပြည်တော် မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မူကြိုကျောင်း က မုဒိမ်း ပြုကျင့်ခြင်း ခံရသူ ရဲ့ […]
ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး၏ သားနှစ်ဦးနှင့် ဗစ်တိုးရီးယားအမှု လုံးဝမသက်ဆိုင်ဟု ဒုရဲချုပ်ပြော…
နေပြည်တော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး၏ သားနှစ်ဦးနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်အပြင် DNA စစ်ဆေးချက်အရလည်း တူညီမှုမရှိဟု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲချုပ် အောင်နိုင်သူ ကသတင်းထောက်များသို့ပြောသည်။ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုကို ယင်းက ဖြေဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး၏ […]
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၅ (သတင်းတမန်) – အသက် ၂ နှစ်ကျော်မိန်းကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် wisdom hill မူကြိုကျောင်းကို ကျောင်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကပြောသည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက “တရားမ၀င်ကျောင်းဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ကျောင်းကပိတ်ရမှာ။ လိုင်စင်တွေဘာတွေမပေးတော့ဘူး။ အဲ့မူကြိုကျောင်းကတော့ပိတ်ရမယ်” ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် […]
“ကိုယ်မွေးထုတ်ထားတဲ့ သားသမီးကို သိန်းတစ်သောင်းပဲ ပေးပေး၊ တစ်ထောင်ပဲ ပေးပေး မလဲနိုင်ပါဘူး”…
နေပြည်တော်(ဇူလိုင် ၅ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်)။ ။ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ အသက်သုံးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအတွက် မူကြိုကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး ဆရာမ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်၏ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် အောင်ကျော်မျိုး(ခ)အောင်ကြီးကို ပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် ဇူလိုင် ၄ရက်နေ့က တရားစွဲဆိုထားသည်။ အဆိုပါ […]
Victoria နဲ့ ယာဉ်မောင်း ရဲ့ DNA ကို စစ်ဖို့ မော်ဒယ် နန်းသီရိမောင်က ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထည့်ပါတယ်တဲ့ …
“ယခုလရဲ့ သိန်း ၂၀၀၀ ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ “ ….
ကိုယ်တိုင် ကံမထူးပေမယ့် ခုလို အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီးတွေ ပေါက်သွားတဲ့သူတွေကို မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာသလို.. သူတို့အတွက် ပျော်လည်း ပျော်မိပါတယ်… ယခုတစ်ခါမှာတော့ ၅ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီးထဲမှ သိန်း ၂၀၀၀ ကံထူးရှင်ကို ပေါ်ထွက်လို့လာပြန်ပါပြီ…. သူကတော့ ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းရွာက မခိုင်ဇာနည်လင်းပဲဖြစ်ပါတယ်… Unicode […]
နေပြည်တော်ရှိ ကေတီဗီများတွင် မိန်းကလေးအလုပ်သမားများ မထားရ နှင့် အနှိပ်ခန်းများ ပိတ်သိမ်းပြီ….
အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ တော်နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ် ထားသည့် အနှိပ်ခန်းများကို ဇူ လိုင် ၁ ရက်ကစ၍ ပိတ်သိမ်းရန်၊ ကေတီဗီများ ည ၁၁ နာရီအထိ သာဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် မိန်းကလေး အလုပ်သမားများမထားရှိရန် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များ က သတိပေးထားသည်။ တရားမ၀င်တဲ့အနှိပ်ခန်း တွေလုံးဝမရှိဖို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူ တာပေါ့။ ကေတီဗီက […]
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတဦး ကျောင်းဆရာတွေလည်း ပေါက်ကွဲကုန်ပြီ။ အမှန်ပဲလေ ကိုယ်သာဆို ကျောင်းကို အရင်စဆွဲမှာ ဦးပညာ ရေ.. မင်း က အခုမှ မင်းကျောင်းက ဒရိုင်ဘာမဟုတ်တဲ့ အောင်ကြီးက မင်းရဲ့ ကျောင်းထဲမှာ ၂၆ မိနစ် နေသွား တယ်လို့ မီဒီယာကို […]
ဗစ်တိုရီးယားအမှုမှာ သူမဟုတ်ကြောင်း အောင်ကြီးက ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ မိဘတွေပြောပြီ …
“သားမှမဟုတ်တာ၊ အမှန်အတိုင်းပဲ သားကပြောတာပေါ့၊ စီအိုင်ဒီကမေးတယ်၊ စခန်းကမေးတယ်၊ သူ့ကို ၃ခါစစ်တယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲ ထွက်ဆိုတယ်” လို့ ဗစ်တိုးရီယားအမှုမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အောင်ကျော်မျိုး (ခ) အောင်ကြီးရဲ့ မိဘတွေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အသက်၂နှစ် ၁၁လအရွယ် မူကြိုကျောင်းသူတစ်ယောက် […]